3 Matanho Ekubudirira Yemagariro Media Dambudziko Rekupindura Martech Zone
3 Matanho Ekubudirira Yemagariro Midhiya Dambudziko Rekupindura
China, November 15, 2012 Chipiri, Mbudzi 13, 2012 Douglas Karr
Takaita hurukuro yakanaka naSteve Kleber weKleber & Associates, iyo agency yakatarisa pachikamu chekuvaka dzimba. Imwe yenyaya dzakakurukurwa kwaive kutya kuti makambani anofanirwa kukunda pavanotarisana nemagariro enhau. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kana dambudziko rikaitika - zvirinani kuve pamusoro pemhinduro yako mumasocial media pane kusavapo zvachose.
Matanho matatu kuCrisis Mhinduro
Pakarepo isa mutengi kurerukirwa iwe nzwisisa dambudziko ravo. Muchokwadi, dzokorora zvakare kwavari kuitira kuti vanyatso kuziva kuti iwe unonzwisisa zvakashata. Kana kujekesa kuri muhurongwa, zvichaitika ipapo. Vatengi vanoda kuziva kuti urikuteerera… uye une mukana mumwe wekugadzirisa dambudziko iri saka ita shuwa kuti warinzwisisa!
Iva nechokwadi chekuti zivai kuti mune hanya. Nekudavirira nekuvaita kuti vazive kuti iwe pachezvako une hanya navo, unogona kudonhedza kusimba kwenyaya pasi uye wozvigadzirisa. Iwe hausisiri chiratidzo chisina chimiro, uri munhu wavanogona kuvimba kuti vayedze kugadzirisa dambudziko rako.
Gadzirisa dambudziko. Usape fomu, nhamba yefoni kana email kero yekuti vataure nayo. Iwe unofanirwa kugadzirisa dambudziko. Iwe. Kana ukakwenya munhu uyu kuenda kumunhu anotevera, vanobva vakuziva iwe izvo zvauri… kunyepedzera. Kana iwe uchinzwisisa uye uine hanya, iwe unoteedzera kuburikidza uye uve nechokwadi chekuti nyaya yagadziriswa.
Izvo hazvireve kuti iwe, pachako, unofanirwa kugadzirisa nyaya yacho. Zvinoreva kuti iwe ndiwe mutungamiri uye munhu anozvidavirira kumutengi kana tarisiro. Ndiro basa rako kutakura munhu iyeye kuenda kune chisarudzo. Ukangorasa uye kumhanya, zvinokonzeresa zvimwe nyaya. Iwe haufarire vanhu kuzviita kana iwe uine nyaya… nei iwe uchizviitira kune wako wega mutengi?
Izwi rekupedzisira pane izvi. Paunogadzirisa dambudziko, iwe uchangopedza imwe yeakanakisa mishandirapamwe yawakambotanga. Kana iwe ukasiya munhu iyeye achifara uye achigutsikana, mikana ndeyekuti ivo vanozogovana izvo kubudirira nenetiweki yavo. Icho chinhu chakanaka.
Tags: dambudziko rekutongadambudziko rezvemagariroevanhu vezvenhauyemagariro enhau dambudziko
Mira Kuviga Chinonyanya Kukosha Chako Webhu Kuvapo
Nov 21, 2012 pa4: 13AM
Iyi blog posvo iri panguva chaiyo sezvo ini ndangotsemura yakavhurwa 'Brand Resilience'. Matipi makuru pano atinogona kupa kune vedu vatengi
Nov 30, 2012 pa2: 02AM
Anoshamisa matipi uye nekutenda zvakanyanya nekugovana iyi. Zvirokwazvo urwu rubatsiro rukuru kune wese munhu. Basa rakanaka!